Gabateewwan fooddaa addabahaa wixinee galfataa ykn fooddawwan firummaa keessatti argamu, tarree dirreewwan gabatee keessatti argaman wajjiin saaga.
Gabateewwan argame tarreessa. Gabatee saaguf, tarree keessa tokko fili akkasumas Dabalijedhu cuqaasi. Maqaa gabatee lama cuqaasu dandeessa, akkasumas fooddaa dirreewwan gabatee wixinee galfataa gara gubbatti ykn fooddaa firummaa qaban mul'isa.
Gabatee ammee filame saaga.
Qaaqa Gabatee Dabalaa cufa.
Title is: Gabateewwan dabali